News - ယနေ့ Maoheng Machinery ကိုအစားအစာပြပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားခံရပြီးသူငယ်ချင်းများစွာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဘာကြောင့် Maoheng ကိုရွေးချယ်သနည်း
1. ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသားအဆင့် AAA စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်ကောင်းမွန်သောအပြုအမူအတည်ပြုချက်ကိုရရှိခဲ့သည်။
၃။ စက်သည် ergonomic နိယာမ၊ အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။
4. လုံခြုံစိတ်ချရမှုကာကွယ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်မှု၊
သန့်ရှင်းသောအပြောင်းအလဲနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း၊ မာကျောခြင်း၊ သတ္တုထည်၏ခိုင်ခံ့မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်းနှင့်ချေးခြင်းခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊
ဖောက်သည်များ၏ ၀ ယ်လိုအားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်“ စက်မှုလုပ်ငန်း - တက္ကသိုလ် - သုတေသန” နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
post အချိန်: စက်တင်ဘာ -23-2019